Inona no tsy mety amin'ny fanandramana COVID-19? Ary ahoana ny 97%?
Home » Vaovao momba ny fahasalamana » Inona no tsy mety amin'ny fanandramana COVID-19? Ary ahoana ny 97%?
IZA: Tsy misy azo antoka mandra-pilamin'ny tsirairay
Notaterin'ny New York Times, Global Research ary haino aman-jery manerantany hafa, ny iray amin'ireo fitsapana be mpampiasa indrindra hahitana ny COVID-19 dia mety ho kilemaina ka ny fanandramana miisa COVID-19 an'arivony no tokony hambara fa tsy manan-kery. Efa am-bolana maro no fantatra ny olana fa mitohy.
Ny famakiana diso diso 97 isan-jato amin'ny fitsapana fahita matetika ampiasaina hamantarana ny COVID-19 dia heloka bevava, hoy ny manam-pahaizana sasany.
Ireo toerana fizahan-tany toa an'i Hawaii dia miankina amin'ny fitsapana mety tsy misy kilema ho an'ireo mpitsidika mba hisorohana ny quarantin.
An-tapitrisany no notsapaina tamin'ny fitsapana izay nolazain'i WHO fa tsy nisy lesoka.
Ny toerana fitsangatsanganana toa an'i Hawaii dia mitaky a Fitsapana haingana momba ny fitsaboana (POC) ary Tontonana Diagnostika RT-PCR. Izy ireo dia samy andrana fanamafisana asidra niokrika (NAAT), ary noho izany dia samy neken'ny State of Hawaii ireo karazana fitsapana roa ireo.
Ny fanehoan-kevitry ny Chain Polymerase amin'ny fotoana tena izy (rRT-PCR) Ny fitsapana dia noraisin'ny Fikambanana Iraisam-pirenena Momba ny Fahasalamana (WHO) tamin'ny 23 Janoary 2020, ho fitaovana hamantarana ny viriosy SARS-COV-2, manaraka ny tolo-kevitry ny vondrona mpikaroka virolojia (monina ao amin'ny Hopitaly Charité University, Berlin), tohanan'ny ny Foundation Bill and Melinda Gates.
Herintaona taty aoriana, ny 20 Janoary 2021, niverina ny fanambarana nataon'izy ireo, saingy tsy nilaza izy ireo hoe “nanao hadisoana izahay.” Fa kosa, ny retraction dia voarindra tsara.
Na dia tsy mandà ny fahamarinan'ny torolàlana diso mamily janoary 2020 aza ny OMS, dia manome toky ihany izy ireo fa “Re-fitiliana ” (izay fantatry ny rehetra fa tsy azo atao).
Ny olana mampiady hevitra dia misy ifandraisany amin'ny isan'ireo tsangambato fanamafisam-peo (Ct), hoy i Pieter Borger sy ny hafa.
Ny isan'ireo tsingerin'ny fanamafisana [tokony] latsaky ny 35; tsara kokoa tsingerina 25-30. Raha ny fahitana virus,> tsingerina 35 ihany no mamantatra ireo famantarana izay tsy mifandraika amin'ny viriosy mamindra dia nofaritana tamin'ny fitokanana ny kolontsain'ny sela.
Ny Fikambanana Iraisam-pirenena Momba ny Fahasalamana dia nanaiky tamim-pahakingana herintaona taty aoriana fa ny fitsapana PCR REHETRA natao tamin'ny ambaratonga fanamafisam-peo 35 (Ct) na avo kokoa dia INVALID. Saingy izany no natolotr'izy ireo tamin'ny Janoary 2020, niaraka tamin'ny ekipa virolojia tao amin'ny Hopitaly Charité any Berlin.
Raha atao amin'ny tokonam-baravarana 35 Ct na mihoatra (izay natolotry ny OMS) ny fitsapana dia tsy azo jerena ilay virus, izay midika fa REHETRA ireo antsoina hoe "tranga tsara" voamarina napetraka nandritra ny 14 volana lasa dia tsy mety.
Raha ny filazan'i Pieter Borger, Bobby Rajesh Malhotra, sy Michael Yeadon, ny Ct> 35 dia efa mahazatra "amin'ny ankamaroan'ny laboratoara any Eropa sy Etazonia."
Ity ambany ity ny soritr'i WHO izay namboarina tamim-pitandremana. Ny lahatsoratra feno misy rohy mankany amin'ilay antontan-taratasy tany am-boalohany dia ao amin'ny annex:
Ny fitarihana WHO Fitsapana diagnostika ho an'ny SARS-CoV-2 dia milaza fa ilaina ny fandikana tsara ny valiny tsara malemy (1). Ny tokonam-baravarana (Ct) ilaina mba hamantarana ny viriosy dia mifanitsy amin'ny haben'ny viralin'ny marary. Raha tsy mifanaraka amin'ny fampisehoana klinika ny valin'ny fitsapana. misy santionany vaovao tokony horaisina ary hosedraina indray mampiasa teknolojia NAT na mitovy. (nampiana fanamafisana)
Ny WHO dia mampatsiahy ireo mpampiasa IVD fa ny fihanaky ny aretina dia manova ny sandan'ny vinavinan'ny valin'ny fitsapana; satria mihena ny fihanaky ny aretina, mitombo ny loza ateraky ny fiheverana diso. Midika izany fa ny mety hahitana olona iray manana valiny tsara (SARS-CoV-2) dia voan'ny SARS-CoV-2 mihena tokoa rehefa mihena ny fiparitahana, na inona na inona famaritana voalaza.
"Positives tsy mety" no hevitra fototra
Tsy olana izany “Positives malemy” ary "Mitombo ny risika amin'ny fisondrotana tsara". Ny atolotray dia ny "Metodôlika miovaova" izay mitarika amin'ny tombana tsy marina.
Ny manamarina izany fanekena ny OMS izany dia ny tombam-bidin'ny positibus covid amin'ny fitsapana PCR (miaraka amin'ny tsingerin'ny fanamafisam-peo 35 sikile na avo kokoa) dia tsy mety. Amin'izay fotoana izay dia mamporisika ny WHO ny hamerenana fitsapana: “Santionany vaovao no tokony horaisina ary hosedraina…”.
Ity tolo-kevitra ity dia pro-forma. Tsy hitranga izany. Olona an-tapitrisany eran'izao tontolo izao no efa nosedraina, nanomboka ny voalohan'ny volana febroary 2020. Na izany aza, tsy maintsy milaza isika fa raha tsy averina andrana indray, ireo tombana ireo (araky ny OMS) dia misy lesoka avokoa.
Hatrany am-piandohana, ny fitsapana PCR dia nampiharina matetika tamin'ny ambaratonga fanamafisam-peo Ct 35 na avo kokoa, taorian'ny fanoloran-tenan'ny WHO 2020 tamin'ny Janoary 12. Ny dikan'izany dia ny fomba fiasa PCR izay ampiharina Manerantany manerana ny 14-XNUMX volana lasa izay nanjary fananganana antontan'isa Covid diso sy diso.
Ary ireo no antontan'isa izay ampiasaina handrefesana ny fivoaran'ny "areti-mandringana". Ambonin'ny tsingerin'ny fanamafisana 35 na mihoatra, ny fitsapana dia tsy hahitana ny viriosy. Noho izany, tsy misy dikany ireo isa.
Manaraka izany fa tsy misy fototra ara-tsiansa hanamafisana ny fisian'ny areti-mifindra.
Midika izany fa ny fepetra fanidiana / fepetra ara-toekarena izay niteraka korontana ara-tsosialy, fahantrana ary tsy fananan'asa (voalaza fa mampihena ny fihanaky ny viriosy) dia tsy misy antony ara-dalàna na inona na inona.
Araka ny hevitry ny siansa:
“Raha misy olona nozahan'ny PCR tsara rehefa tokonam-bokatra 35 na ambony no ampiasaina (toy ny tranga any amin'ny ankamaroan'ny laboratoara any Eropa sy Etazonia), ny mety voalaza fa voa ny olona dia latsaky ny 3%, ny probabilité izay nilaza fa valiny tsara dia 97%
Ankoatr'izay, ireo fitsapana PCR ireo dia tsy miaraka amin'ny famaritana ara-pitsaboana ireo marary izay notsapaina.
Fikarohana momba ny fandefasana solika fiaramanidina maharitra maharitra 100% amin'ny sidina voalohany natomboka
Maty androany ny filohan'i Tanzania ary misy antony tsy ofisialy